'कर्पोरेट लेडी'ले पाइन् 'पपुलर भोट' : शिखर सुजकी निर्देशक संगीता कंडेरिया चार्टड एकाउन्टेन्स संघमा निर्वाचित !
ARCHIVE, POWER NEWS » 'कर्पोरेट लेडी'ले पाइन् 'पपुलर भोट' : शिखर सुजकी निर्देशक संगीता कंडेरिया चार्टड एकाउन्टेन्स संघमा निर्वाचित !
काठमाडौँ- नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) को निर्वाचनमा कार्यकारी समितिको सदस्यमा एकमात्र महिला उम्मेदवार संगीता कँडेरियाले पपुलर भोट अर्थात सबैभन्दा बढी मत ल्याएकी छिन् । उनी शिखर सुजमा निर्देशकको रुपमा कार्यरत छिन् । उनी कार्यकारी समितिको सदस्यमा उम्मेदवार थिइन् । यस्तै उनीसँगै सुवास पौडेल, सन्दीपबाबु पौडेल, ऋषि पौडेल, अमृत गिरी र रुद्रनाथ पोख्रेलले जीत हाँसील गरेका छन् । कंडेरिया शिखर सुजकि निर्देशक हुन् भने सन्दीपबाबु पौडेल टुरिजम डेभलोपमेन्ट बैंकका सीएफओ हुन् । यस्तै ऋषि पौडेल सिटि मनी एक्सप्रेसमा सीएफओ छन् भने अमृत गिरी र सुवास पौडेल 'प्राक्टिस'मा छन् ।
यता संघको अध्यक्षमा आनन्द शर्मा वाग्ले निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी बद्री कुमार गुरागाईंलाई हराउँदै वाग्ले अध्यक्ष पदमा बिजयी भएका हुन् । उनी यसअघि एक्यानको उपाध्यक्ष थिए भने त्यसअघि उनी कोषाध्यक्षको भूमिकामा एक्यानमा थिए ।